यस्तै हुनसक्छ सूर्यको अन्तिम क्षण, एउटा तस्बिरले खोल्यो ताराको मृत्यु रहस्य !
२o७५ श्रावण ४ शुक्रबार / Friday, July 20, 2018
२o७४ पौष १५ शनिबार
तस्बिर : ESA
युरोप / खगोलविद्हरुले एउटा ताराको विनाश हुनुअघिको तस्बिर खिच्न सफल भएका छन् । ग्रुस नामक तारामण्डलको एउटा ताराको अन्तिम समयको दुर्लभ तस्बिर युरोपेली अन्तरिक्ष संस्था (ईएसए)ले खिचेको हो । उक्त तारा पृथ्वीबाट ५३० प्रकाश वर्ष टाढा रहेको छ ।
उत्तरी चिलीस्थित एउटा मरुभूमिमा रहेको विशाल टेलिस्कोपको सहायतामा यस्तो दुर्लभ तस्बिर लिइएको हो । यस्तो तस्बिर लिइएको यो नै पहिलो पटक हो । वैज्ञानिकहरुका अनुसार अबको पाँच बिलियन वर्षको बीचमा हाम्रो आफ्नै ग्रहले पनि सोही चुनौती सामना गर्नुपर्नेछ ।
तस्बिर लिइएको ताराको नाम पि१ ग्रुस रहेको छ । उक्त तारा पनि हाम्रो सूर्यजस्तै रहेको उनीहरुको कथन छ । तर यो तारा सूर्यभन्दा ३५० समय ठूलो र उत्तिकै चम्किलो रहेको छ ।
एसडीओले खिचेको सूर्यको सतहको तस्बिर । तस्बिर : नासा
खगोलविद्हरुका अनुसार तारामा देखिएको राता फोका र धर्साहरुभित्रका कोशहरु जुन तरल र ग्यास मिलेर बनेको संरचनाको घनत्वका फरक आयामहरु हुन् भने यसले ताराको सतहलाई ढाक्नेछ । यस्ता हरेक कोशहरु ७५ मिलियन माइलको फैलावटमा अर्थात् ताराको पूर्णव्यासको एक भाग रहेका छन् ।
प्रारम्भिक अवस्थामा तारा निकै खुम्चेको भए पनि पछि यसको तापक्रम १०० मिलियन डिग्रीसम्म पुगेर यसभित्रको हाइड्रोजन इनर्जीको बाँकी भण्डारण समेत जलेको हुनसक्ने वैज्ञानिकहरुको बुझाइ छ ।
सूर्यको सतह । तस्बिर : GETTY IMAGES
अर्थस्काई डट ओआरजीमा विश्लेषण गरिएअनुसार यस्तो अत्यधिक तापक्रमकै कारण ताराको अर्को फेज जुन यसमा रहेको हेलियमलाई कार्बन र अक्सिजनलाई बाक्लो अणुहरुसँग जल्न सुरु भयो ।
यसले ताराको बाहिरी सतहलाई नाश गरिरहेको सूचक हो । खगोलविद्हरुले कुनै पनि ग्रहको अन्तिम अवस्थामा यसभित्र हुने क्रियाप्रतिक्रियालाई तस्बिरमार्फत कैद गर्नसकेको यो नै पहिलो भएको बताएका छन् ।
मिरर युकेबाट भावानुदित ।
किन सूर्य छुन चाहन्छन् वैज्ञानिकहरु ? अगष्ट ४ मा हुँदै छ नासाको सपना साकार
अमेरिका / अमेरिकी अन्तरिक्ष अनुसन्धान संस्था (नासा)ले लामो समयदेखि प्रतीक्षारत अन्तरिक्ष अनुसन्धातृ स्पेसक्राफ्टको निर्माण अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ । उक्त यानले सूर्यलाई समेत छुने विश्वास गरिएको छ । नासाका अनुसार अर्को
सन्दीपले लिए सूर्यकुमार यादवको विकेट
काठमाडौँ । आइपिएलमा मुम्बईविरुद्ध खेलिरहेका सन्दीप लामिछानेले आजको खेलमा पनि पहिलो ओभर बलिङ गर्दै एक विकेट लिएका छन् । दिल्लीको बलिङको सुरुवात गरेका सन्दीपलाई पहिलो तीन बलमा १२ रन हानेका सुर्यकुमार
सूर्यविनायक नगरपालिकाले सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर वृद्धिका लागि विद्यालयसँग २७ बुँदे सम्झौता
भक्तपुर / सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तरीय शिक्षाका लागि सूर्यविनायक नगरपालिकाले यहाँका सामुदायिक विद्यालयहरुसँग २७ बुँदे कार्यसम्पादन सम्झौता गरेको छ । नगरपालिकाले आयोजना गरेको भेलामा बृहत् छलफल पछि नगर भित्रका ४० सामुदायिक विद्यालयका
सूर्य टोबाकोलाई एक साताभित्र कारबाही प्रक्रियामा ल्याउछौँः राज्यमन्त्री अर्याल
काठमाडौ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले एक साताभित्र सूर्य टोबाको कम्पनीलाई पूर्णरुपमा ऐन तथा निर्देशिका कार्यान्वयन नगरेकाले कारबाही प्रक्रियामा ल्याउने भएको छ । राजधानीमा शनिबार आयोजित “जनस्वास्थ्य प्रवद्र्धनः सूर्तिजन्य पदार्थ नियन्त्रण र नियमन” विषयक
भक्तपुरमा स्कूल बस दुर्घटनामा ६५ विद्यार्थी घाइते (अपडेट)
टर्कीमा दुई वर्षे संकटकालको अन्त्य हुने संकेत
भारतका पूर्वअर्थमन्त्री पि चिदम्बरमलाई भ्रष्टाचारको अभियोग
काँग्रेसद्वारा जुम्ला घटनाको विरोध
अब कर्मचारीको तलब स्थानीय तहबाटै
जुम्लामा घाइते भएका प्रहरी जवानलाई हेलिकप्टरमा काठमाडौँ लगियो
राप्रपाको संगठन विभागमा मनोनयन, भक्तिप्रसाद सिटौला बने सदस्य सचिव
डा.गोविन्द केसी शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जमा
भक्तपुरको ठिमीमा स्कुल बस दुर्घटना हुँदा ५८ जना घाइते
भारतमा एक रुसी महिला सामूहिक बलात्कृत, संलग्नताको आशङ्कामा छ जना पक्राउ
विश्व फुटबलमा मेसी र रोनाल्डोको राज तोड्दै लुका मोड्रीच !
अर्जेन्टिनाका रेफ्री नेस्टर पिटानाले विश्वकपको फाइनल खेल खेलाउने
एक दुईजना साँसद उभिएकै भरमा संसद अवरुद्ध हुदैन : प्रधानमन्त्री ओली
सरकार जुम्ला पुगेर डा.गोविन्द केसीसँग वार्ता गर्दैन – शिक्षामन्त्री पोखरेल